Huawei मेट 10 लाइट, मध्य दायरा4क्यामेरा संग टर्मिनल संग प्रबल गरिएको छ ग्याजेट समाचार
हुवावे मेट १० लाइट, मध्य दायरा टर्मिनलको साथ cameras क्यामेराको साथ प्रबल गरिएको छ
हालसालै दुई मोडेल यसले हुवावेको क्याटलगको शीर्षमा हाईवेई मेट १० र हुवेवे मेट १० प्रो लाई हावी गर्नेछ। यद्यपि यो सबैलाई थाहा छ कि चिनियाँ कम्पनीले मध्य-दायरामा राम्रो बिक्री परिणाम प्राप्त गर्दछ। अगाडि नबढिकन, गत वर्ष स्पेनमा सबैभन्दा धेरै बिक्रि हुने मोबाइल हुवावे पी Lite लाइट थियो। अब यो "लाइट" दायरा नयाँ टर्मिनलको साथ बढ्छ, तर सामान्य भन्दा बढी भिटामिनयुक्त। त्यसको बारेमा हुआवेई मेट 10 लाइट.
यस मोबाईलको उदार स्क्रीन छ। विकर्ण सम्म पुग्छ 5,9 इन्च र यसको रिजोल्युसन २,१2.160० x १,०1.080० पिक्सल सम्म पुग्छ; त्यो हो, पूर्ण HD + रिजोलुसन। त्यस्तै, यसको अगाडि पूर्ण रूपमा पर्दा द्वारा गरिन्छ; कुनै बटनहरू र तल ब्रान्ड लोगो मात्र।
यस बीच, पछाडि हामी एउटा फिंगरप्रिन्ट रिडर र दुई क्यान्सरहरू राख्ने फोटो क्यामेरा: १ 16-मेगापिक्सल सेन्सर र २-मेगापिक्सल सेन्सर। यसको साथ हामी शुद्ध बोकेह शैलीमा परिणामहरू प्राप्त गर्नेछौं; त्यो भन्नु हो, हामीले बनाएका चित्रहरूको धमिलो प्रभाव। तर सावधान रहनुहोस्, किनकि अगाडि नै क्यामेरा डबल सेन्सर राख्ने निर्णय गरिएको छ। यस अवस्थामा हामी एक १ and र २ मेगापिक्सल सेन्सरको सामना गरिरहेका छौं।
यस Huawei मेट 10 लाइट को शक्ति को रूप मा, एक चिनियाँ ब्रान्ड एक होमग्रीउन प्रोसेसर मा दांव: एक किरिन 659 G z working-कोर २.8 गीगाहर्ट्जको कार्य आवृत्तिको साथ। चिप GB जीबी र्यामको साथ छ। जबकि फाईलहरू बचत गर्ने ठाउँ GB4जीबी छ। र हो, तपाईं माइक्रोएसडी ढाँचामा (२64 जीबी सम्म) मेमोरी कार्डहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
अन्तमा, हुवावे मेट १० लाइट एक डुअल सिम स्लटको साथ मोबाइल फोन हो। यो अर्को पुस्ता 4G नेटवर्कमा जडान गर्न सक्षम छ। योसँग वाइफाइ, ब्लुटुथ कम खपत र NFC जडानहरू छन्। स्थापना भएको एन्ड्रोइडको संस्करणको रूपमा, हामी एन्ड्रोइड .7.0.० नौगटमा फर्किनु पर्छ - तिनीहरूले एन्ड्रोइड ओरेओलाई मानकको रूपमा छनौट गर्दैनन्। साथै, यसको ब्याट्री 3.340 XNUMX० मिलिअम्पहरू छ जुन यो दिनको अन्त्यमा प्लगमा जानुभएको बिना नै पुग्न सक्षम हुने आशा गरिन्छ। यसको मूल्य हो 349 यूरो.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » टेलिफोनी » मोबाईलहरू » हुवावे मेट १० लाइट, मध्य दायरा टर्मिनलको साथ cameras क्यामेराको साथ प्रबल गरिएको छ
HP ZBook x2, एक परिवर्तनीय जुन शुद्ध शक्ति हो
सामसुले बिक्सबी २.० प्रस्तुत गर्दछ, स्मार्ट उपकरणहरूमा आधारित सहायकको दोस्रो पुस्ता